Blog - BIM Trainings
Posted by	kozeyar | Uncategorized	|
vSphere VMware Licensing ကို vSphere enviroment အပိုင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ ရှိနိူင်ပါသည်။ Essential Kit Essential Plus Kit Standard Enterprises Plus အထက်ပါဖော်ပြခဲ့တာတွေက license အမျိုးအစားများသာဖြစ်ပြီး အကယ် သာ မိမိ vSphere environment မှာ Virtual Machineအရေအတွက် များလာခဲ့လျှင် VMware ရဲ့ vSphere with Operation Management (VSOM) ကိုအသုံး ပြုဖို့ အကြံပြုပါတယ် ဘာကြောင့်အသုံးပြုသင့်လဲဆိုတဲ့ အသေးစိတ်ကိုတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်လက်ဖေါ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ vSphere Operation Management ကို ၀ယ်ယူအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်း အောက်ပါအတိုင်း အတိုင်း License စသဖြင့် တွေ့ ရှိနိူင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ VMware vSphere Acceleration Kits Standard with vSOM VMware vSphere Acceleration Kits Enterprise Plus with vSOM ဖော်ပြခဲ့တဲ့ License Type တွေကို VMware သက်ဆိုင်ရာ Partner သို့ မဟုတ် Reseller တွေ ထံမှသာ ၀ယ်ယူရရှိနိူင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ VMware ကနေ တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းတော့ မြန်မာနိူင်ငံမှာ ရရှိနိူင်မှာ မဟုတ်သေးပါဖူး။ မြန်မာနိူင်ငံမှာ ရှိတဲ့Business အသီးသီးမှာရှိနေကြတဲ့ IT industrial အတွင်းမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ ညီငယ်...
လက်ရှိ Business Transition အများစုက Digital Business ကို Migration လုပ်ရုံမျှသာ မက Cloud Computing ဘက်ကို ရွေ့ လျားလာနေကြတယ်ဆို မြင်ရုံ ကြားရုံမျှ သာ မဟုတ်ဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပက်သက်ဖြစ်နေကြပြီးဆိုတာ ကိုယ်ကိုတိုင် အသိပါဘဲ။ ဥပမာအားဖြင့် Mobile banking App တစ်ခုက ထင်ရှားတဲ့ သက်သေတစ်ခုပါဘဲ။ Business workload တွေကို Efficient & Effective ဖြစ်စေဖို့ Hardware base တစ်ခုတည်းပေါ်မှာတင်အမှီပြုပြီး အားကိုးနေရတဲ့အခါ Multi Solution Tasks တွေ ပြီးမြောက်ဖို့ အခက်အခဲတွေ ရှိလာကြပါတယ်။ Competitive World ဖြစ်နေတဲ့ ခုလိုအချိန်မျိုးမှာ ပိုဆိုးပေါ့ဗျာ။ ဒီအခြေနေတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိူင်သော နည်းလမ်းများစွာ ဈေးကွက်ထဲမှာ ရှိနေပေမဲ့လည်း Virtualization Technologies ကသာ များစွာသောထိရောက်မှု့ပံပိုးမှု့ တွေ လုပ်ဆောင်ပေးနေတာတွေ့ ကြရပါတယ်။ Virtualization Technologies ဆိုတာနဲ့ မြန်မာနိူင်ငံမှာ VMware ကိုပြေးမြင်ကြမှာ မလွဲဧကန်ပါဘဲ သို့ ပေမဲ့ဈေုးကွက်ထဲမှာ များစွာသော Virtualization Vendor နဲ့ သူတို့ တွေ ရဲ့ Product တွေ ရှိနေကြသေးပါတယ်။ 2016 ခုနှစ်ရဲ့Top 10 Virtualization Technology Companies List ကို http://www.serverwatch.com မှတဆင့်...
Posted by	admin | CCIE	|
ကျနော်ပြောချင်တာက Networking ဆိုတာ အင်မတန်ကျယ်ပြန့်ပြီးတော့ CCIE နဲ့တင် မရပ်နေဘူးဆိုတာ ပြောချင်တာပါ။ CCIE ကို အစပဲလို့ တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုပြောလို့ အံ့သြသွားရင် သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါကအမှန်ပါပဲ။ Networking ဆိုတာ အရမ်းကို ကျယ်ပြန့်လွန်းပြီးတော့ Networking ထဲက အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို ကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တောင်မှ အချိန်အများကြီးပေးပြီး လေ့လာနေမှဖြစ်တာပါ။ ကလင်တန်က ပြောခဲ့တာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ကလင်တန်က “နားလည်မှု” ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုက ပြသနာဖြစ်နေတာပဲလို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ နားလည်ခြင်းဆိုတာ Router တစ်ခုမှာ ဘယ်လို Configure လုပ်ရမလဲဆိုတာကို သိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ Router တစ်လုံးရဲ့အမြင်ကနေ Technology ရဲ့ အမှန်တကယ်လုပ်နေတဲ့အရာကို နားလည်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အားလုံးကိုလည်း ဒီအတိုင်းပဲ မြင်စေချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ Router တွေမှာ OSPF Configure လုပ်တတ်ရုံနဲ့ OSPF ရဲ့အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို သိတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ကားတစ်စီးကိုမောင်းနေသလိုပါပဲ။ ကားရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဘယ်လိုတွေ လုပ်နေလဲဆိုတာ သိချင်မှသိမယ် ကားကိုတော့ မောင်းလို့ရတဲ့သဘောပါ။ NDA ကိုမချိုးဖောက်ဘဲနဲ့ CCIE Exam နဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ ထပ်ပြီးပြောပြချင်ပါတယ်။ CCIE Exam မှာခင်ဗျားတို့ကို Router တွေ Switch တွေကို နည်းလမ်းတစ်မျိုးစီနဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ Configure လုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုတာ ဘာမှမထူးခြားတဲ့ကိစ္စပါ။ Nothing more, nothing less ပဲ။ ဒါပေမဲ့ Technology အမျိုးမျိုးရဲ့ သူ့နေရာနဲ့သူ အဆိုးအကောင်းတွေ ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီး...
System Engineer Professional တတ်ရောက်ဖို့ လိုအပ်မဲ့ အရည်အချင်းတွေ ပြောပြပေးပါဗျ. ဆိုတဲ့မေးခွန်း BIM Trainings Facebook Page ရဲ့ comment မှာ မြင်မိခဲ့ ရလို့System Engineer တစ်ယောက်ဖြစ်စေဖို့ လိုအပ်တဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်များ Professional System Engineer ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်စေဖို့လိုအပ်တဲ့ အရည်အသွေးများကို ကိုယ်သိသမျှလေးကို မျှဝေဖို့ ဆန္ဒလေးတွေ ဖြစ်လာမိပါတယ် ။ ပထမဦးစာ အခြေခံဖြစ်တဲ့ System Engineer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ချက်များကို ဦးစာ ဆွေးနွေးလိုပါတယ် ဒီနေ့ ရာမှာ ပြောဖို့ ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုပါ မပါမဖြစ်ြေ့ပာသင့်တယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆပါတယ်။ စာရေးသူတို့အသက်အရွယ်လူလတ်ပိုင်းအများစု အပါအ၀င် လူငယ်အများစုမှာ မိမိတို့ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်များမှ ကျောင်းပြီးစ အခြေနေမျိုးမှာ ရည်ရွယ်ချက် ရည်မှန်းချက် နဲ့ ထပ်တူမကျတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေလေးတစ်ခုရှိနိူင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုနဲ့ တင် ဘ၀တွေကို လွယ်ကူစွာနဲ့ ဘဲ စတေးပစ်လိုက်ကြတာကို စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ကြုံတွေ့ ခဲ့ ဖူးပါတယ်။ တချို့ လူငယ်တွေမှာလည်း ဘာသာစကားများလေ့ လာလိုက်စားကြတာတွေ့ ရသလို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတက်ပညာသင်တမ်းများလည်းတက်ရင်း လေ့ လာရင်း အောင်မြင်သွားတဲ့ သူတွေ ရှိကြသလို လမ်းဆုံးအောင် ခရီးဆုံးအောင် မရောက်ခဲ့ကြတဲ့ လူငယ်များစွာလည်း တွေ့ ခဲ့ ဖူးပါတယ်။ ဆိုလိုခြင်တာက...
အခုတလော ကျနော့ကို လာမေးကျတဲ့ မေးခွန်း တစ်ခုက “Professional Network Engineer တစ်ရောက်ဖြစ်ဖို့ Diploma / Degree စတဲ့ Academic Certificate တွေ ရှိဖို့လိုလား” ဆိုတာပါပဲ။ တစ်ချို့ကလည်းပြောကြတယ် “Degree တွေ Certificate တွေက အရေးမကြီးပါဘူး။ တကယ်တတ်ရင် တကယ်တော်ရင် ဘာမှကြောက်စရာ မလိုဘူး ၊ ကြိုးစားရင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်” ဆိုပြီးတော့။ ဒါလဲမှန်သင့်သလောက် မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Network Engineer တွေဆိုတာ တစ်ခြား IT Professional တွေဖြစ်တဲ့ Software သမား တွေနဲ့မတူပါဘူး. Bill Gate တို့ Mark Zuckerberg တို့ လည်း ဘွဲ့မရပဲ အောင်မြင်နေတာပဲ ဆိုပြီး နှိုင်းလို့မရပါဘူး။ Software သမား တစ်ရောက်ဟာ တကယ်တော်ပြီး ကြိုးစားရင် ကိုယ်ပိုင် App / Web site / Software Platform စတဲ့ Product တွေကို ဖန်တီးပြီး အောင်အောင်မြင်မြင် စီးပွါးရှာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Network Engineer အလုပ်က တခြား IT Professional တွေနဲ့မတူပါဘူး။ Network Engineer တွေဆိုတာ အမှန်တော့ IT Service Sector ကသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ Customer တွေ User တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ရှိပြီးသား Router ၊ Switch ၊...
Posted by	Aung Naing Moe | Uncategorized	|
ကျွန်တော်တို့ Network အကြောင်း စလေ့လာတော့ 1.unicast 2.multicast 3.Broadcast 4.anycast ဆိုပြီး လေ့လာကြရပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ CCNA , CCNP level လောက်ထိ unicast တို့၊ broadcast တို့အကြောင်း ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောကြ၊ ဆွေးနွေးကြပေမယ့်၊ Multicast ကတော့ အမေ့ခံဘ၀နဲ့ ကျန်နေခဲ့ပါ တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Multicast application တွေကို အသုံးပြုတဲ့ environment နဲ့ဝေးကွာနေခြင်း၊ Network ပညာရပ်ကို လေ့လာတဲ့အခါ အခြေခံလောက်နဲ့ ရပ်ပြီး ရှေ့ဆက်ပြီး မလေ့လာခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါ တယ်။ multicast application တွေ မသုံးတဲ့အတွက် multicast အတွက် အာရုံစိုက်စရာမလိုတော့ မလေ့လာ ဖြစ်တော့ပါဘူး။ အသုံးမပြုသည့်တိုင်အောင် အခြေခံလောက်နဲ့ ရပ်မနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ သီအိုရီအနေနဲ့ လေလာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ရှေ့ဆက်မလေ့ာလဖြစ်တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ Multicast ဆိုတာ one to group trammision လောက်နဲ့ပဲ အဆုံးသတ်သွားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Stock market တွက်ကျယ်လာတဲ့တစ်နေ့ Multicast application အသုံးတွင်ကျယ်လာပါ လိမ့်မယ်။ဘဏ်တွေ၊ sotck ဒိုင်တွေ၊ stock ပွဲစားတွေ၊ stock ငွေကြေးဈေးကွက် ကျယ်ပြန့်လာတဲ့အခါ Multicast ဟာ အရေးပါလာပါလိမ့်မယ်။အဲဒီတော့ Multicast အကြောင်း သိဖို့လိုလာပါပြီ။ ဒါကြောင့် Multicast မိတ်ဆက်ဆိုပြီး ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ What is Multicast? Multicast ဆိုတာ data trammision လုပ်တဲ့အခါ...
ဒီနေ့တော့ Network Security အကြောင်းနည်းနည်း ပြောရအောင်။ Network Security လို့ပြောလိုက်ရင် Firewall ၊ VPN ကိုပဲ ပြေးမြင်တတ်ကျပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတော့ ယနေ့ခတ် Nnetwork များကို လုံခြုံအောင်လုပ်ရတာဟာ အရှုပ်ထွေးဆုံးအလုပ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Technology တွေနဲ့ Internet ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကြောင့် Network တွေဟာ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း တွေအတွက် အဓိက လိုအပ်ချက်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါတယ်။ Network တွေဟာလည်း တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဘယ်တုံးကမှနဲ့မတူအောင် ချိတ်ဆက်မိနေပြီး Network တစ်ခုကိုဝင်ရောက် ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ Entry Point နေရာတွေ ဟာလည်း များသထက်များလာပါပြီ။ ဒီလိုမျိုးတိုးတတ်လာတဲ့ Network Technology တွေနဲ့အညီ အဲဒီ Network တွေရဲ့လုံခြုံရေး ကာကွယ်ရတာဟာလဲ တစ်နေ့တခြား ပိုပြီးတော့ခက်ခဲလာပါတော့တယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ Security ကို Design လုပ်ရာမှာ အလွှာလိုက်ခွဲပြီး အလွှာတစ်ခုချင်းဆီရဲ့ လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက် များနဲ့ စိန်ခေါ်မှုများကို Focus လုပ်ပြီး သင့်တော်တဲ့ နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုကာကွယ်ရပါတယ်။ ဥပမာ အဖြစ် လေဆိပ် လုံခြုံရေးကို ကြည့်ရအောင်. လေဆိပ်အများစုမှာ အများပြီသူဝင်ထွက်သွားလာနိုင်တဲ့ Main Terminal Area ရှိပါတယ် ၊ Departure Hall ၊ Arrival Hall စသည်ဖြင့် ၊ အဲဒီမှာ Boarding Pass ထုတ်ပြီး ပြီဆိုရင်တော့ Security/Immigration ကိုဖြတ်ပြီး Transit Area ကိုဝင်လို့ရပါပြီ။ အဲဒီမှာတစ်ဆင့်...
Datacenter Networks – Part 1
ဒီနေ့တော့ Datacenter Network အကြောင်းနည်းနည်း ပြောရအောင်. အရင်ဆုံး Datacenter Network ဆိုတာဘာလည်း ၊ ပုံမှန်သုံးနေကျ Network တွေနဲ့ဘာကွာလည်း ကြည့်ရအောင်။ Datacenter Network ဆိုတာ Datacenter ထဲမှာ အသုံးပြူတဲ့ Compute ၊ Application ၊ Storage ၊ Security Node နဲ့ Service Component တွေကို အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Datacenter Network တွေရှိတာကြာပြီဆိုပေမဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက Network Engineer တွေအတွက် Datacenter Network တွေနဲ့သိပ်မရင်းနှီး ခဲ့ပါဘူး။ အဓိက အကြောင်းအရင်းကတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ Business တွေက Information Technology (IT) ကို အကုန်အကျများတဲ့ Cost Center တစ်ခုအဖြစ် သဘောထားခဲ့ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Competitive Market သိပ်မရှိတော့ IT ကို Business Enabler အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာ တော်တော်ကိုနည်းခဲ့ပါတယ်။ Business Competition များတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာကြတော့ အများထက်သာအောင် ၊ အချိန်တိုတိုနဲ့ အလုပ်ပြီးအောင် ၊ အမှားနည်းအောင် ၊ Customer Experience ကောင်းအောင် စသည်ဖြင့် Application တွေ Services တွေကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးခဲ့ကျပါတယ်။ အဲဒီလို Application တွေ Service တွေ အားလုံးကို Run ထားဖို့...
ကျွန်တော်တို့ routing and switching လေ့လာစဉ်က Catalyst IOS switching အကြောင်း လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ Data Center ဘက်ကို လေ့လာမယ်ဆိုရင်လည်း Data Center topic တွေထဲက အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Nexus Switching အကြောင်း လေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Catalyst IOS နဲ့ Nexus ဘာတွေကွာတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်လက်လှမ်းမှီသလောက် ဆွေးနွေးပါ့မယ်။ တကယ်တော့ Catalyst IOS နဲ့ Nexus Feature တွေ တော်တော်များက တူပါတယ်။ ဒါကြောင့် CCNA , CCNP , CCIE routing Switching ကိုလေ့လာထားတဲ့သူတွေက ပိုမိုပြီး လွယ်ကူစွာနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာတွေတူလဲဆိုတော့- VLAN Trunking VTP Rapid PVST MST EtherChannel PVLAN UDLD FHRP OSPF, EIGRP စတဲ့ IGP တွေနဲ့ EGP ဖြစ်တဲ့ BGP စတာတွေအားလုံးက အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာတွေကွဲလဲဆိုတော့ Catalyst IOS မှာ မပါဘဲ Nexus မှာဘဲ ရတဲ့ Feature အသစ်တွေကတော့- FEX vPC FabricPath OTV Native FC Switching FCoE စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ Nexus Switching ကိုလေ့လာတဲ့အခါ Feature အသစ်တွေကိုတော့ သီးသန့်ထပ်ပြီး လေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ VTP...
OSPF – Part5(OSPF Network Types)
OSPF Network Type OSPF Network type တွေအကြောင်း ဆွေးနွေးပါ့မယ်။ OSPF network type တွေဟာ အသုံးပြုနေတဲ့ media device ပေါ်မူတည်ပြီး အပြောင်းလဲ ရှိပါတယ်။ ပုံသေ မရှိပါဘူး။ ဥပမာ- အသုံးပြုနေတဲ့ media က Ethernet လား၊ Frame Relay လား၊ PPP လား စတဲ့ media ပေါ်မူတည်ပြီး OSPF network type တွေ ကွဲသွားပါတယ်။ OSPF Network type ကွဲသွားတာနဲ့အမျှ- Hello message ပို့တဲ့ပုံစံ ၊ update ပို့တဲ့ပုံစံ ကွဲသွားပါတယ်။ ဘယ် router က neighbor adjacency form လဲ ? Next hop calculation process ဘယ်လိုတွက်မလဲ စတာတွေပါ ကွဲပြားသွားပါတယ်။ OSPF network type တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Broadcast Non-Broadcast Point-to-Point Point-to-Multipoint Point-to-Multipoint Non-Broadcast Loopback OSPF router တွေအချင်းချင်း neighbor ဖြစ်ဖို့ network type တူဖို့ လိုပါသလား? တူဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ဘက်နဲ့တစ်ဘက် compatible ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ မဖြစ်မနေ တူရမယ့် attribute တွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ timer လို attribute...
Archives Select Month April 2017 March 2017 March 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015